गणेशा | मझेरी डट कम
‘रौदा नई लागलो ? कनिकाल छहाइरमे बैठैला या न गे, सुकुनी !’
उसले मतिर नजर गाडेर हेर्ने क्रम जारी नै राख्यो । मभित्र भित्रै पाकिसकेकी थिएँ । त्यस टन्टलापुर घाममा वरपर कुनै खेतालाहरू थिएनन् । छहारीमा बस्न सक्ने नजिकको रुख उसले नै ओगटेको थियो । अरू रुख निकै टाढा थिए । म पसिनाले निथु्रक्क भिजिसकेकी थिएँ । एकछिन छहारीमा सुस्ताएर स्वर्गीय आनन्द लुट्न चाहन्थेँ । ऊ मलाई बोलाइरहेको थियो । म चाहेर पनि उसको नजिक जान सकिरहेकी थिइनँ ।
थुकका छिटा पुछ्दै हत्त न पत्त उसले ठिक हुँदै छ भन्ने कुरा गर्दै भन्यो, ‘आब ठिक भेल जखा लगैछै । एकक्षण बैठ त !’
‘दश मिनेट क्या, दश मिनेट !’ ऊ दश मिनेटको रट लगाइरहेको थियो । म अँझै निरुत्तर भएर झोक्रिरहेकी थिएँ । ऊ अँझ नानाभाँतीका कुराहरू फलाक्ने सुरमा थियो । सारा रुपियाको नोट त्यहीँ खसालिदिएर म पूर्ववत् काममा जुटिरहेँ ।
उसले अरू केके भन्यो कुन्नि मैले राम्ररी सुनिनँ र सुन्न पनि चाहिनँ । म आफैँलाई आफ्नो शरीर गन्हाइरहेको थियो । अर्कातिर म उनीहरूका आँखामा फोहोरी जातकी थिएँ । यद्यपि उसको रहरको तृप्ति स्थान मेरो फक्रँदो शरीर थियो । यो कसैले नछोएको शरीरसँग खेलवाड गर्ने पक्षमा ऊ हुँदो हो । म कसैलाई शरीर नै दिनुपर्यो भने जीवनभर दिने पक्षमा थिएँ । मेरो कुरूप र गन्धे मुहार हेर्नुपर्छ भनेर ऊ मुन्टो अर्कातिर फर्काएर मनोकांक्षा पूरा गर्ने ध्याउन्नमा छ भन्ने बुझ्न मलाई समय लागेन । दुई/चार पैसाको लोभमा अरूको हात माथि पर्ने र आफ्नो हात तल झर्ने काम गर्न म कदापि सहमत थिइनँ ।
यद्यपि नियतिलाई मेरो मनोकांक्षा प्रिय रहेनछ । त्यस दिनको घटना सम्झन्छु, आगोको रापमा सेकिन पुगेको हरियो फूलको हालतमा पुगेको क्षण सम्झेर गहभरि आँसु आउँछ । दोष कसलाई दिनू र ! उसले पनि मलाई जबरजस्ती गरेको होइन, केही मूल्य चुकाएरै स्वाद फेरेको हो । मैले पनि भुलेर त्यो काम गरेकी होइन । जानेरै बलिरहेको बत्तीमा झुम्मिने पुतली बन्न पुगेकी हुँ ।
छुट्ने बेलामा दुई हजार थम्याउँदै मायालु पाराले उसले भनेको थियो, ‘सुकुनी, तिमी त्यस पैसाले शृङ्गारपटारका समानहरू किन । राम्री होऊ । पछिपछि लत्ताकपडाका लागि अरू पैसा दिऊँला । घर जानेबेलामा सधैँ मलाई भेटेर जानू !’
उसको अन्तिम वाक्यले मलाई फेरि कुत्कुत्यायो । स्खलित मन पुन: ऊर्जाशील भयो ।
ऊ निरुत्तर भएर घरतिर लाग्यो । म पुन: खेतबारीको काममा जुटेँ ।
हामी प्राय: दिउसो चाहिँ झाडीझोक्रीहरूमा भेट गर्न थाल्यौँ । एकापसमा तृप्ति भएपश्चात् छुट्टिने गर्थ्योँ । रहर पुर्याएर ऊ कतै लाग्थ्यो म काममा जोतिन्थेँ ।
सानी बहिनी बाख्रा पगाहा लगाउन चौरीतिर निस्की । म निरुत्तर, नि:सहाय र निरीह बनेर घोसेमुन्टो लगाइरहेँ । बुबा जुरुक्क उठ्दै मैले सबैको अनुहार कालो बनाएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘तोहोर करिया मुह देइखके हमरा सभबके मुह कारी हैछै ।’
म बडो बिलखबन्दमा परेँ । साँचो सत्य कुरा बताऊँ भने दयाराम पटवारी खान्दानमा कालो पोतेको ठहरिने । नभनूँ भने जन्मदाताको अन्तस्करणलाई बेस्कन चिमटेको ठहरिने ! म दोधारमा अल्झिरहेँ ।
अन्ततोगत्वा चन्देश्वरले भनेको बचन सम्झिएँ, ‘सुकनी, जेजस्ता आपत आए पनि तिमीले सत्य कुरा कसैलाई नबताउनू नि ! हामीलाई इज्जत साह्रै प्यारो लाग्छ । कसैले दाग लगाए त्यसलाई छाड्दै नछाड्ने हाम्रो बानी छ । तिमीलाई थाहै छ, हामीले चाहेमा यस भेगमा दिनलाई रात र रातलाई दिन पनि पार्न सक्छौँ । तिमीलाई जति रुपिया, पैसा चाहिन्छ लेऊ । कतै गएर कोहीसँग घरजम गर्ने मन भए पनि आर्थिक सहयोग गरौँला । हामी बीचको गोप्य कहिल्यै नखोल्नू । म सदा तिमीलाई सहयोग गरिरहने छु ।’
उसले मलाई धम्की मिश्रित सहानुभूतिका शब्दहरू निकालेको सम्झेर मन एक तमासको भयो । उसको मुखबाट पटक पटक कर्कश बोली सुनेकी थिएँ, ‘तेरो कारण मैले बेइज्जती भएर जेल जानुपर्यो भने तँलाई जिउँदै खरानी बनाएर मात्र मेरा पाइला जेलतिर अघि बढ्ने छ । यस कुरालाई हर्दम हेक्का राखेर काम गर्नु !’
घरबाट बाहिरिँदै मैले भनेकी थिएँ, ‘म्या, जे भेले से भगेलै । जवाफ नही मागिह । आब तोरा सभके दु:ख देला नही चाहिछी । हमरा खोजी नही करिह ।’
मैले जवाफ दिन नचाहेको, बुबाआमालाई लगायत कसैलाई पनि झमेलामा फँसाउन नखोजेको र घर छाडेर अन्त कतै जान चाहेको आशय सुनेर आमा टोहोलाइरहनुभयो । म पिठ्युँ देखाएर क्रमश: क्रमश: जन्मघरबाट गन्तव्यविहीन यात्रामा निस्किरहेकी थिएँ ।
मेरो यत्रो दिनको लामो कुरा सुनेर जोशियानी दिदीले लामो श्वास फेर्नुभयो । म उहाँको सक्रियतामा स्थापना भएको सामुदायिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र मारामोस्काको हरियो बेडमा सुतेकी थिएँ । अघि कुरा सुनाइरहँदा प्रसव पीडा कम थियो । यत्तिखेर पीडा क्रमश: बढ्दै जाँदै थियो ।
झुमनी दैयालाई सम्झिएँ । म जन्म घरबाट आइपुग्दा उनले स्नेहले मलाई आतिथ्य दिएकी थिइन् । एक दिन शंका लागेर मेरो पेट छाम्न आइपुगिन् । बच्चा खेलेको थाहा पाइहालिन्् । केरकार गर्न थालिन् । ढुङ्गो बोल्ला तर म बोलिनँ । नबोलेरै मैले जितेँ । घर फर्किन भन्नुभयो । मैले बिदाबारी भएर आएको कुरा बुझाएँ । दैयाको कचकच बढ्दै गयो । म सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेँ ।
डाक्टर केके सोध्दै थिए । मैले जवाफ नदिए पछि तपाईंलाई बोलाए । कुरा यत्ति नै हो !
र, उत्तेजक स्वरले भन्नुभयो, ‘सुकनी बहिनी, म रहुञ्जेल र मैले सकुञ्जेल तिम्रो अभिभावक म भएँ । तिमी बच्चाकी आमा । म बच्चाकी दादी ! सर्त मञ्जुर छ ?’
हाल : शिक्षक, श्रीराष्ट्रिय मावि, कञ्चनरुप ३, बनरैत टोल, सप्तरी ।
होस गर यो बताससँग
संसार यस्तै छ
देश निकै छट्पटायो